Dhaqanka noocaas ahi wuxu keenay in Diinta Islaamku ay ka noqoto Somaliya mid ku ekaata Masaajida iyo qabuuraha oo kaliya, oo aan u soo gudbin guryaha, iskoolada, jaamacadaha iyo xarumaha dowladda. Waxa intaas u dheeraa Sh. Wuxuna si muuqata u taageeri jiray urur diimeedkaas, wuxuna ka sheekayn jiray qaab dhismeedka ururka Ikhwaanka iyo dacwadooda kursi doonka ah. Sidoo kale wadamada Sucuudiga iyo Suudaan waxa aaday arday fara badan waxbarasho nooc walba lehna u raadsaday. Midabka dadka Somalida ah oo ka duwan kan Afrikaankana wuxu u muuqdaa intiisa badan isku dar Carab iyo Afrikaan mid ay iska dhaleen. Email required Address never made public.
Aadan wuxu dhagaysan jiray tafsiirka Sh. Halhayska Somaliduna wuxu ahaa 40 jir ayaa lagu toobad keena oo masaajida lagu galaa. Posted on May 9, by Anand Nepal. Kuwa kasoo laabta Talyaanigana qamro iyo dhilaysi ayay ku caanbixi jireen. Email required Address never made public. Waxaana ku qanciyay fikradaas macalim Masri ah oo Jaamacadaha Sucuudiga midood wax ka dhigi jiray.
Fikradda Takfiirka oo uu qaadan doono mardhow ayaa kasoo dhadhamaysa jawaabta Sh. Dhanka dhalinyarada Xerta ah iyo kuwa ka baxa iskoolada Carabiga ee yumeysi marka ay shaqooyin ka helaan dowladda, ama qaarkood loo diro waxbarasho dibadaha ah sida Ruusha iyo Talyaaniga, waxay soo noqon jireen iyagoo diintii ka faanaya. You are commenting using your Twitter account.
Cadaynta ugu wayn arinkaasna waa xijaabka dumarka Muslimiinta oo ku haray dhamaan dhulkii ay xukumi jireen khaliifooyinka Islaamka ee markii dambe gumaysigu uu gacanta ku dhigay. Xasan Daahir Aweys oo isagu iskiis u galay ciidanka kana mid noqday ururka Al-Ahal isagoo askari ah, mase hubo inuu isagu keenay fikradda ah in lagu biro ciidamada, waxaas muuqata inuu ku dhiiri galiyay in lagu biro ciidamada.
Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your Facebook account. By continuing to use this website, you agree to their use. Garkii waa la wada xiirtay, intii uu ku yaalay, inta kalana wali umaba soo bixin gar. Raggii laga saaray ururkana isagaa ugu yeeray goobta lagu balamay.
Iyo Sayliciya oo fulo abtirsata Sh. Soomaliya iyo Kenya khidad fiican ayuu u dagay Sh. Mustafa Xaaji oo isagu diiday inuu ku biiro Al-Ahal. Sida aan sheegnay Sh. After the success of the title song, the full audiojukebox featuring three songs was released recently. Dhalinyaradii Waxdada kuwoodii ugu firfircoonaa waxa lagu casumay Muqdisho si madaxdii Al-Ahal loogu geeyo oo looga soo dhaadhiciyo inay kusoo biiraan Koonfurta.
Uwaysiya oo ku abtirsata Sh Uweys Al-Qaadiri. Dhalinyarada Waxdadu waxay lee yihiin Maktabad waxayna akharistaan kutubta Ikhwaanka Masar. Markuu muddo joogay ayaa kovie sheegey in dhulkii uu ku dhashay ee reerkiisii daganayeen uu nabaad guurey, oo dadkii deegaanka ahaa, ay ka qaxayaa ama ka barakacayaan.
Culumada dibada kasoo laabatay hal cilad oo ilaa iyo maanta xal loo waayay ayay dalka soo galiyeen, waana ciladda aan darteed buugan u qorayo. Raggii ka tirsanaa Al-Ahal oo diiday inay qaataan Takfiirka waxa ka mid ahaa Sh. Dacwadiisuna ay ahayd la dagaalanka shirkiyaadka iyo quraafaadka.
Cilmigii gumwysi cibaadadiiba kor ayay u kaceen. Ragaan iyaga ah oo arday ahaa qudhooda waxa loo sii kala badalay gobolada dalka oo ay noqdeen iyaguna markooda culumo. Waxa jirta laba aragtiyood ee qeexaysa qaabkii Islaamku kusoo gaaray Somaliya.
Wixii jaamacado galay ama shaqooyinka dowladda helayna meeshoodii ayay kasii faafiyeen dacwadii iyo balaarintii ururkii Al-Ahal. Waqtiga quraacda iskoolada waxa ardayda ugu soo celiya casharkii xalay ee Sh.
Hagardaamo Gumeysi: OSF Drama 2010 Full Movie
Diinta Islaamka iyo Soomalida Keebaa Horeeyay? Iimaankeey oo casharo ka bilaabay, isna hoostiisaa laga shaqaystay oo waxa casharkiisa kusoo celin jiray wiil ka tirsan ururka oo la yiraahdo Muriidi Omvie Suufi.
Halkaas oo ahayd meesha ugu adag ee dariiqooyinku ay saldhigyo waawayn ku leeyihiin. Doodahaas dheer ka dib waxa carooday rag ka mid ahaa ururkii Jamaaca Islaamiya oo u arkay in Sh.
Waxayse wadaageen labada urur fikirka Al-Ikhwaan Al-Muslimiin oo waxay labaduba ka biyo cabi jireen dalka Masar. Posted on May 9, by Anand Nepal.
Hagardaamo Gumeysi: OSF Drama Full Movie
Culumadii kasoo noqotay dibada waxay camireen masaajidii firaaqada ahaan jirtay, waxayna kasoo buuxiyeen dhalinyaro iyo dumar farabadan. Yaqouba ninka kaliya oo dunida waaya aragnimo u furay, u iftiimiyey in benu aadamka uusan ahayn oo kaliya inuu waxkastaba haysto, wuxuu tusaaleeyey in shaqsi kaliya aduunka horumarkiisa wax ka badali kara.
Inta aanan u galin qaybta afaraad waxan rabaa inaan wax yar ka saxo qaladaad ku jiray qoraaladii hore. Wuxu cadaymo muuqda ka keenay quraanka aayado faro badan oo Rabi uu uga digay dadka inay cid aan isaga ahayn, baryaan, magan galaan, irsiq waydiistaan, ilmo waydiistaan, gargaar waydiistaan, ka cabsadaan, wax ka rajeeyaan.
Waxan wax yar ka iftiimin doonaa urur ka dhisnaa Waqooyiga oo la oran jiray Waxdatu Al-Shabaab.
Waxana ku liibaanay dacwadaas kumanaan qof oo ka haray baryadii iyo magan galkii Awliyada iyo qabuuraha. Rag badan oo kasoo laabtay Takfiirkii iyo kuwo xabsiga laga soo fhll ayaa dib usoo galay ururka waana lasoo dhaweeyay.
Aadan wuxu dhagaysan jiray tafsiirka Sh.
Wuxu kaloo amar ku bixiyay Sh. Khasaaruhuna waa in dhalinyaradaas Arbiciinka wax ku wacdiya ay isku arkeen culumo waawayn oo ka talin kara mustaqbalka Dalka hagagdaamo Diinta. Waxay halkaas uga hareen Suufiyadii iyo Xadradii lagu dhex waday ururkii Al-Ahal.
Sidaas daraadeed dadka ku xiran casharadda Sh. Cali-Dheere oo hada madax ka ah Jaamacadda Muqdisho iyo Dr. Gmeysi Takfiirka oo ah mid soo bilaabatay waqtigii Qaliif Cali Bin-AbiDaalib, waxa bilaabay rag loo bixiyay Khawaarij oo banaystay dhiiga Muqlimiinta.